ဗေဒင်နှင့် ဘာသာရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ဗေဒင်နှင့် ဘာသာရေး
Posted by nwelinoo on Dec 13, 2010 in Know-How, DIY, My Dear Diary | 18 comments
အချို့သော သူများသည် ဗေဒင်၊ နက္ခတ်၊ ယတြာ၊ မန္တရား၊ အင်းအိုင်၊ လက်ဖွဲ့၊ လက်လှည့်စသည် အထင်သေး ရှုတ်ချချင်ကြသည်။ ထိုထိုပညာရပ်တို့ အင်မတန် နက်နဲ နူးညံ့ သိမ်မွေသည့် ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုပညာရပ်တို့ လောကီအရာ ဖြစ်သောကြောင့် လောကုတ္တရာအရာနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ လောကီပညာရှင် ကျင်လည်ကျက်စားရ ပညာရပ်သာ ဖြစ်သည်ကို ဘာသာရေးသမားများနှင့်၊ ဘာသာရေး စိတ်ဝင်စားသူတို့ သိသင့်ပါသည်။
အကျွန်ုပ်သည် ထိုထိုလောကီရပ်များကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူနည်းမှလွဲ၍ မဖတ်ဖူး၊ မလေ့လာဖူး၊ မကျင်ဖူးပါ။ လောကုတ္တအရာ၌ အခြေခံလောက်သာ သိပါသည်။ ထိုသို့ မဖတ်ဖူး၊ မလေ့လာဖူး၊ မကျင်လည်း ဖူးသည့်အတွက်၊ မတတ်ကျွမ်းသည့်အတွက် ထိုထိုပညာရပ်တို့သည် အလသမျိုးဖြစ်သည်၊ အချီးနှီးဖြစ်သည်၊ အသုံးမဝင်၊ အလိမ်အညာများဟု အကျွပ်နု မထင်မှတ်သလို ယူလည်း မယူမဆပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုက်လား၊ အကျင်လည်ဖူးဘဲ တရားမဲ့၊ အထောက်အထားမရှိ၊ အကျိုးအကြောင်းမိပါပဲ နှိမ့်ချ၊ ပြောဆို၊ ရေးသားခြင်း မပြုကြဖို့ ဆန္ဒပြုပါသည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လေ့လာ၊ ကျင်လည်၍ အကျိုးအကြောင်ကို မြင်သိကာ ပညာရှိသည်ဟု ယူဆလျှင် ဝေဘန်နိုင်သည်၊ ထောက်ပြနိုင်ပါသည်။ ပညာရပ်တိုင်းသည် အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာကြခြင်း မဟုတ်သည်ကို ဆင်ခြင်ကြဖို့လိုသည်။ ရှေးပညာရှိ ကဝိတို့က အမျိုးမျိုးကြံဆကာ ဖြစ်နိုင်ရာသည်၊ သင့်မြတ်နိုင်သည် စသဖြင့် အဖန်ဖန် လေ့လာ၊ မှတ်သားကား၊ ဉာဏ်ကစား၍ လောကနှင့် လူသား အကောင်းကျိုးတို့အတွက် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိသည်။
ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့သည့် အနှစ်တရားမှာ နိဗ္ဗာန်သာဖြစ်သည်။ ထိုနိဗ္ဗာန်ကို သွားရန်အတွက် မဂ္ဂင်ယာဉ်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းကား ထိုသို့ ပြုမှုကျင့်ကြံကာ ရိက္ခာပြည့်ဝစွာဖြင့် သွားကြရမည်ဟု လမ်းညွန်ခဲ့သည်။ ပေးကမ်းစွန့်ကြံခြင်း ဒါနကုသိုလ်တခုတည်းဖြင့် နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်၊ စောက်ထိန်းခြင်း သီလကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ရပေမည်၊ တဖန်ကို ကျင့်သုံးခြင်း (ဆင်ခြင်ပွားများ) ဘာဝနာတရားဖြင့် ပြုမှာသာ တဆင့်တဆင့် မြင့်သထက်မြင့်ကာ ဦးတည်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်ဟူသည်မှာ အချိန်အခါမရွေး၊ နေရာမရွေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ ပြုလုပ်ကြရမည်။ မည်သည့် အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ အကုသိုလ် အဖြစ်မခံဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ကုသိုလ်လုပ်ရာတွင် ပြဿဒါး၊ ရက်ရာဇာ ဟူ ခွဲခြားထားခြင်း မရှိပါ။ ဗေဒင်ပညာတို့၌လည်း ထို ပြဿဒါး၊ ရက်ရာဇာတို့တွင် ကုသိုလ်မလုပ်ရဟု တားမြစ်ခြင်း မရှိပေ။ တားမြစ်ခြင်း ရှိသည်က ထိုနေ့ ထိုရက်တို့ အကုသိုလ် အမှုများကို မပြုလုပ်ရဟုသာ ရှိသည်။
ဗေဒစသည့် ပညာရပ်တို့၏အား အကျွန်ုပ်၏ အမြင်ကို တင်ပြလိုပါသည်။ အစဉ်သဖြင့် ရေအလျဉ်ကဲ့သို့ အစုန်သာရှိကြသည့် လူသားတို့သည်လည်း ထိုရေလျဉ် ဥပမာအတိုင်း အကုသိုလ်အမှုတို့၌သာ မွေ့လျော်နေတတ်ကြသည်။ အကုသိုလ်အားလုံးကို တခုမှ မပြုလုပ်ရဟု တချက်လွှတ်အာဏာဖြင့် တားဆီးခြင်းထက် “လုပ်တော့လုပ်ပါ၊ ထိုနေ့ ထိုရက်တို့တွင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့၊ ဒီနေ့ ရက်ဇာရာ၊ (သို့) ပြဿဒါးဖြစ်တယ်၊ တကယ်လို့ လုပ်မိရင် လုပ်မိသူတို့ အန္တရာကြီးသထက်ကြီးလိမ့်မယ်” စသဖြင့် ခြောက်၍ တဖုံ မြောက်၍ တမျိုး အကုသိုလ်တရားတို့ကို မလုပ်မိအောင် ကြံဆောင် စီစဉ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်မိသည်။
မွေးနေ့ သောကြာ၊ တနင်္လာ၊ ကေသာ ဆံဖြတ် မပြုအပ်။ ထိုလင်္ကာတွင် သောကြာ၊ တနင်္လာတော့ ဘယ်အကြောင်းမျိုး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မပြောတတ်သော်လည်း မွေးနေ့ ဟူသည် စကားလုံးကို ဆင်ခြင်ကြည့်လျှင် မိမိ၏ မွေးနေ့သည် နေ့များထဲတွင် မြင့်မြတ်သည့် နေ့တနေ့ဖြစ်သည်ဟု လူသားတရပ်လုံး ခံယူထားကြသည်။ ထိုသို့ မြင့်မြတ်သည့်နေ့တွင် ထိုထို ပုဂ္ဂလိက အမှုတို့၌ ရှုပ်များနှင့် အချိန်မကုန်စေပဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ရန် ရည်သန်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိသည်။
ထိုသို့ နက္ခတ်ကြည့်ခြင်းကို သုံးသပ်သည့်အခါ နက္ခတ်သည် နာရီ၊ စက္ကန့်၊ မီနစ်သဖြင့် အချိန်များနှင့် နေရာတို့ ကြည့်ရှုကာ ကြိုတင်သုံးသပ်သည့် အရာဖြစ်ပေမည်။ အကျွနုပ်တို့ နိုင်ငံတွင် တံငါသည်များသည် ငါးဖမ်းရန် ပင်လယ်သို့မထွက်ခင် ကြိုတင် စိတ်ဖြင့် ခန့်မှန်းတွက် ချက်ကြကာ လှိုင်းကြီးနိုင်၊ မကြီးနိုင်၊ မုန်တိုင်းမိ၊ မမိနိုင် ရာသီဥတု ကောင်း၊ မကောင်း၊ ငါး ရ၊ မရ တွက်ဆ၍ လှေအကြီးအငယ်တို့ ထွက်ကြသည်နှင့် တူတော့သည်။ တံငါသည်များ ခန့်မှန်းချက်မှာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မှန်ကန်ကြသည်။ နက္ခတ်သည်လည်း ကြယ်၊ လ၊ တိမ်၊ ကောင်းကံယံသို့ကြည့် ထိုမျှမကသော ကြီးကျယ်လှသည့် အတွက်အဆများနှင့် ခန့်မှန်းရသည့် ပညာတခုပင်ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် တရားလက်လွတ် မပြောသင့်၊ မရေးသင့်ပါ။ ထိုသို့သင် လောကီနှင့်၊ လောကုတ္တရာကိုလည်း ကွဲပြား ခြားနားစွာ သိဖို့ လိုအပ်သည်။ တရားလက်လွတ် ပြောဆို ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြင့် ထိုထိုပညာရပ်တို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့ ပညာရှိတို့ကို စော်ကားရာ ရောက်ပေလိမ့်မည်၊ ထိုပညာရှိကြီးသည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနှင့် ပြည့်စုံသည့် သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်လျှင် ပို၍ပင် အပြစ်ကြီးမားလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်အပြုရဟု ထိုထိုပညာရပ်များမှ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း အလျဉ်းမျှ မရှိပါ။ အကုသိုလ်အမှုတို့ကိုသာ မပြုသင့်ကြောင်း ပြဆိုထားလျက် ရှိပါသည်။ ကြီးကျယ်မြင့်မား၊ ဆန်းကြယ်ခန်းနားလှသည့် လောကီပညာရပ်ကြီးများ ဖြစ်သည်။ ပညာမပြည့်ဝ၊ ကျန၊ သေချာစွာ မသိပဲ၊ မလေ့လာပဲ ချောက်စား၊ ဟောက်စား၊ မြှောက်စားများကြောင့် ထိုပညာရပ်တို့၏ ညှိုးနွမ်းရခြင်းသည်။ ထိုသို့ ခြောက်စား၊ ဟောက်စား၊ မြှောက်စား လုပ်စား မသူတော်များကိုသာ အဖြစ်ဖို့ ရပေလိမ့်မည်။
သည် ပညာရပ်တိုင်းမှာရှိ၍ ပညာရှင်များကို
ယင်းပညာရပ်များကို ကျနော်ယုံပါသည် ။ မယုံသူရှိပါက အဝေးနေသူဖြစ်လျှင် ဇာတာပုံတင်ပေးလိုက်ပါ ပတမဆုံး တင်သူအား အခမဲ့ ကြည့်ပေးပါမည် ..။ မမှန်က လျှော်ကြေးပေးပါမည် …။
(မွေးနေ့ သောကြာ၊ တနင်္လာ၊ ကေသာ ဆံဖြတ် မပြုအပ်) ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သောကြာသား ဆံတော်ပယ်သည်နေ့သည် တနင်္လာနေ့ ထို့ကြောင့် သောကြာနေ့မွေးသောသူသည် တနင်္လာနေ့တွင်ဆံပင်မညှပ်ကောင်းပါ လို့ရှေးလူကြီးများကသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ ကျန်သည့်နေ့သားများနှင့်မဆိုင်ပါ ခင်ဗျာ…
ပညာရပ်တခုအနေနှင့် တကယ်ရှိပါသည်။ အသုံးကျ မကျကတော့ သုံးသူအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အခြားလောကီ ဥပမာ-အင်း အိုင် လက်ဖွဲ့ အတတ်များထက် အရပ်ထဲတွင် အကျွမ်းတဝင် ရှိသောကြောင့် ပိုနာမည်ပျက်ရ ပိုအလွဲသုံးစား အလုပ်ခံရသည် ဟုထင်ပါသည်။
” မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုက်လား၊ အကျင်လည်ဖူးဘဲ တရားမဲ့၊ အထောက်အထားမရှိ၊ အကျိုးအကြောင်းမိပါပဲ နှိမ့်ချ၊ ပြောဆို၊ ရေးသားခြင်း မပြုကြဖို့ ဆန္ဒပြုပါသည်။ ” လို့ရေးထားတာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်ထင်ပါတယ် … ဘယ်သူတွေက ဘာများပြောခဲ့လို့ ယခုလို ပို့စ်မျိုးဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာ သိပါရစေလား ။
etone is look like my friend….If it is not difficult for you, May I know your age please….
လက္ခဏာပဲထားပါတော့..။ လူလက်ချောင်းတွေလှုပ်မှ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာတာမဟုတ်လား..။
သိပ်ပံအရလည်း.. အရေပြားမှာအေ၇းအကြောင်းပေါ်ဖို့ ..အကြိမ်သန်းနဲ့ချီလှုပ်ရတယ်ဆိုပါတယ်..။
လက်ချောင်းလှုပ်တာကြည့်ပြီး … လက်ဝါးပြင်ပေါ်ကအစင်းလေးတွေကြည့်ပြီး .. ရြှေ့ဖစ်ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်လောက်ပါတယ်..။
လကမ္ဘာရဲ့ဆွဲအားကြောင့်တောင် ပင်လယ်ဒီရေတက်လာနိုင်တာ..လူသားပေါ်လည်း ဆွဲအားတွေက အကျိုးသက်ရောက်မှာ အသေအခြာပေါ့..။
သွေးလည်ပါတ်မှု့၊ အသက်ရှုနှုန်း သွေးထဲ..ခန္ဓာထဲကဓါတ်သဘာတွေသေချာပေါက်ပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
ဲဂြိုလ်ဆိုတာက.. ဒြပ်ဝတ္တု၊မြေသား၊ ဓါတ်လုံးတွေပဲမဟုတ်လား..။ ဆွဲအားရှိပါတယ်..။
ဒါကြောင့် နက္ခတ်အသွားအလာဟာ..လူတွေကို.. မတူညီတဲ့အချိန်နဲ့..မတူညီတဲ့အကျိုးတွေသက်ရောက်မှာ အသေအချာပါပဲ..။
ပညာရပ်တခုအနေနဲ့ အပြစ်မရှိ… သုံးသူတွေအလွဲသုံးစားလုပ်သူတွေပေါ်မူတည်ပြီးသာ… အပြစ်ဖြစ်ကြတာမို့ … တလွှဲမသုံးကြဖို့နဲ့..တလွှဲသုံးသူတွေကို ..မီဒိယာက..ဖော်ထုတ်..အရေးယူတာမျိုးနဲ့.. ပြန်လှန်ထိမ်းကြောင်း နိုင်တာမျီုးဖြစ်စေလိုပါကြောင်း….။
ရထားတလမ်း…..ကားတလမ်း…..သာဖြစ်၍ သူ့လမ်းနဲ့ သူ့ခရီးဆက်ရင် သူ့ပန်းတိုင်ရောက်မှာ မလွဲပါဘူး။
တခါတရံ ရထားလမ်းနဲ့ ကားလမ်း နီးစပ်ရုံမက တခုနဲ့တခု ဖြတ်သွားတာတောင်ရှိပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ မော်လမြိုင်သွားတဲ့ ရထားလမ်းရဲ့ တချို့နေရာမှာ ရထားက အရှေ့ဘက်ဦးတည်ပြီး ကားလမ်းက တောင်ဘက် ဦးတည် ဖြတ်သွားတာတွေရှိလို့ ကားနဲ့ သွားတဲ့သူက ရထားနဲ့သွားတဲ့သူတွေကို မုတ္တမ မော်လမြိုင်ရောက်တော့မှာမဟုတ်လို့ ပြောရင် လွဲပေတော့မပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
နောက်တခုက ခရီးသွားသူတွေက ရက်ရာဇာရွေးပြီးခရီးထွက် ဓါးပြတွေကလည်း ရက်ရာဇာရွေးပြီး တိုက်တော့ ကွက်တိပေါ့ဗျာ….
အဲဒီတော့ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ ပညာရပ်တွေအများကြီးပါ အားလုံးကိုသိအောင် တတ်အောင် လေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်နဲ့ လောကအတွက် အကျိုးရှိတာကိုအသုံးချပြီး ကိုယ်မလေ့လာတဲ့ ပညာရပ်တခုကို အပြစ်ပြောနေခြင်းကတော့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ……….
တစ်ဝက်မှန် ပြီး တစ်ဝက်မှားပါသည်။
စကား ၁၀ ခွန်းဟောလျှင် ၅ခွန်းမှန်ပါမည်။
အယောက် ၁၀၀ ဟောလျှင် ၅၀ မှန်ပါသည်။
စာအုပ် တစ်အုပ် ၇၀၀ နဲ့ တစ်သိန်းထုတ်ရောင်းလိုက်ပါသည်။
တစ်ဝက်မှန် ပြီး တစ်ဝက်မှားရင်တော်တော် တည့်နေတယ်ခေါ်ရမယ်..။
၁၀ပုံ၁ပုံမှန်ရင်ကို … တော်တော်ဟုတ်နေပါပြီ။ တကယ်က ..အပုံ ၁၀၀ ၁ပုံ မှန်ရင်ကိုတော်တော်ကံကောင်းတာပါပဲ..။
ဒီလိုပညာရပ်တွေက ..ရှေ့ ကလူတွေဖြစ်လာပြီးတာကို ပေရွက်..ကျောက်စာ၊ နုတ်ဘုတ်တွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်မှတ်သားထားပြီး ..နောက်လူလာမေးတဲ့အခါ.. ရှေ့ လူဖြစ်တာနဲ့အနီးစပ်ဆုံး ပြန်စသ်းစား..ပြန်ရှာပြီး.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးထည့်လို့… ခန့်မှန်းပြန်ပြောတာပါ..။
ယုံပြီး ပုံပုံ… ။ ပုံပြီး..ယုံယုံ. မဟာအမှားလို့ထင်ပါကြောင်း..။
( အဲဒီလိုဆိုတော့ ပညာရပ်မှာ အပြစ်မရှိ.. သုံးစွဲသူပေါ်မှာသာ မူတည်တယ် ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါကြောင်း)
ဗေဒင်ကိုတော့ စိတ်လိုလက်ရတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဖူး ထူးခြားတဲ့နိမိတ်တွေနဲ့ အိမ်မက်တွေကတော့ ကျနော်ကိုတော်တော်လေးလွမ်းမိုးတယ်။ အဲဒါကြောင့်အိမ်မက်နဲ့ နိမိတ်တွေကိုတော့ သတိထားဖြစ်တယ်ဗျ
အိမ်မက်ထဲမှာ ခေါင်းဘယ်နှစ်ခါ အခေါက်ခံရဖူးသလဲ။
တစ်ခါမှမခံရဘူးပါဘူး မနေ့ညကတောင်ပီတူ့ အချစ်တော်ဂျီးလင်မယားကိုတောင် သွားလုပ်ကြံရတယ်လို့မက်တယ်ဗျ တကယ်ပြောတာ
ဗေဒင်ဆိုတာတစ်ကယ်ရှိတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုပါ ~~~
ဒါပေမဲ့လေ့လာကြည့်တော့ ဗေဒင်ဆိုတာ အမှန်တစ်ကယ်ရှိတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုဆိုတာသိလာတရ်၊ ပီးတော့ အမှန်တစ်ကယ်သာ တွက်တတ်လို.ရှိရင် ဘယ်နေ.သေမရ်/ဘာဖြစ်မရ် ဆိုတာကအစ သိနိင်ပါတရ်၊
၁။ ဗေဒင်ဆရာက ဗေဒင်အမှန်တကယ် မတွက်တတ်ခြင်း
၂။ ဗေဒင်လာတွက်တဲ့သူရဲ. ကံတရားပြောင်းလဲသွားခြင်း
(ကံတရားပြောင်းလဲသွားခြင်းရှင်းလင်းချက် >>> လူတစ်ယောက်စီမှာရှေးဘ၀ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားရှိပါတရ်၊ အဲ…ဗေဒင်ကဒီအထိပဲသိနိင်ပါတရ်၊ လက်ရှိဘ၀မှာပြုလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်/အကုသိုလ် တွေကြောင့် ကံပြောင်းလဲနိင်ပါတရ်၊ ကောင်းတဲ့ကံပါလာပေမဲ့လည်း လက်ရှိဘ၀မှာ အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင် ကံဆိုးသွားမရ် / မကောင်းတဲ့ကံရှိခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိဘ၀မှာ ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင် ကံကောင်းလာပါလိမ့်မရ်)
ဒါပေမဲ့ …. ဗေဒင်ဆိုတာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါ။ (တချို.က ဘာသာရေးနဲ. ရောချကြတရ်။ ဒီမှာသိပ်မဆိုင်လို.အများကြီးမပြောတော့ဘူး)
အဲဒါကြောင့်မို. ဗေဒင်ပြောသမျှလဲ ဘ၀မဆုံးကြပါနဲ.အုံး။
ကိုယ့်ရဲ.မှုရင်းကံကို ပြောင်းလဲလာအောင် ကိုယ်ပဲ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတရ်။
ဗေဒင်ဆရာတွေက လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ယတြာတွေက လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ရှိကြပါစေ။
ယုံကြည်နေယင်ဘာမဆိုအစွမ်းရှိပါတယ်…သရဲရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူမှသရဲ အခြောက်ခံရတာပါ ဒီလိုပါဘဲဗေဒင်ယုံတဲ့သူသည် ဗေဒင်မှန်ကြောင်းသိကြပါတယ် မယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဘာမှသတိမထားမိကြပါ တကယ်တော့လူတွေမှာဦးဆောင်မှုကစိတ်ပါ စိတ်ကယုံကြည်သွားပြီဆိုတကယ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။။
Nwelinoo, you posted interesting subjects. If we have to look at ‘prediction, prophecy, astrology and so on’ in terms of Buddhism it is important to look at them as separate. Buddhism inanutshell is to rid oneself of greed, hatred and ignorance. Baedin is something like looking one’s future throughawindow but one has to be mindful there are many unkown factors involved. In today’s term, it’s like constructinga‘computer model’. But if one has to recount on Pattana (the teaching of anatta) there is ‘karma pyiccayaw’ and ‘vibaga pyiccayaw’ which has to be taken into account. The Buddha said, “What you are is what you have been; what you will be is what you do now.” Karma does not decay like external things, or even become inoperative. It cannot be destroyed ‘by time, fire or water’. Its power will never disappear, until it is ripened.